Nzira Yokusarudza Nayo Email Service Provider | Martech Zone
China, Gunyana 10, 2015 Douglas Karr
Vhiki rino ndakasangana nekambani yaifunga kufunga nezvekusiya yavo email service provider uye kuvaka yavo email system mukati. Kana iwe ukandibvunza makore gumi apfuura kana iri yaive zano rakanaka, ndingadai ndakati kwete. Nekudaro, nguva dzashanduka, uye tekinoroji yeESPNs iri nyore nyore kuita kana iwe uchiziva zvauri kuita. Ndosaka takagadzira CircuPress.
Chii Chashanduka neemail Service Vapi?
Shanduko hombe neESPs yave iri mukutakura. Izvo hazvisi izvo ESPs zvakachinja, iwo maIPP. Email kufambiswa kwehunyanzvi kune makuru ESPs anoshandiswa kuve nekutaurirana kwakananga neInternet Service Provider kunetseka uye kuona kugonesesa kwakanaka. Nekufamba kwenguva, zvakadaro, ISPs dzakapfiga iwo mahofisi ndokutendeukira kune algorithms yekutarisa anotumira mukurumbira, kuongorora zvemukati, kuvharira kana kugamuchira email, uye kuifambisa iyo kuenda kune SPAM maforodha kana iyo inbox.
Ramba uchifunga kuti kununurwa hazvireve kupinda muinbox! 100% emaemail ako anogona kunge achienda kuJunk Folder, uye izvo zvinoenderana ne100% kuburitswa. Kunyangwe kana usiri kushandisa ESP haina kukupa chero mukana uri nani wekusvika mubhokisi rekunyora kana uchiziva zvauri kuita Tinoshandisa 250ok kuongorora kwedu kuinbox kuiswa uye mukurumbira.
Kune hunhu hwakangwara uhwo Email Vashandi Vanopa ipa kuti iwe haungade kuzovandudza zvemukati, zvakadaro. Iwe unofanirwa kuongorora mutengo wekusimudzira kumutengo webasa reemail. Mukufunga kwangu wega, paunotanga kutumira mazana ezviuru emaimeli pamwedzi, ungangoda kutarisa kugadzira yako mhinduro.
havukavu - Kana iwe uri kutumira mamirioni emaemail pazuva, kuvandudza zvivakwa zvekambani senge Salesforce Chaizvoizvo Target pamwe hazvimbofi zvine musoro. Ivo vanokwanisa kuburitsa mabhiriyoni emaemail pasina kubwaira ziso.
Hunyanzvi - Kana iwe usina vashandi vane ruzivo kana uchida kuwanda kwekubata ruoko kuburikidza nekugadzirwa uye kuitwa kwemaemail ekutengesa nzira, hautombodi kuvaka yako mhinduro. Iwe ungangoda kushanda nekambani hombe senge Delivra uyo anopa fantastic vatengi.
Bounce Management - Kutumirwa neemail hakusi nyore sekutumira email. Pane zvakawanda zve zvikonzero nei maemail bounce uye iwe unofanirwa kuvaka nekugadzirisa maitiro ekufunga kuti wotumirazve iyo email kana kuti usazvinyora kune anogamuchira email.
SPAM Kuteerera Kwemutemo - Pane mitemo yakasiyana pasirese iyo inotonga kushandiswa kweemail kutsvaga kukumbira. Kuve nechokwadi chekuteerera kunogona kukuserera musoro wakawanda.
patani - Iwe unoda pre-yakagadzirwa wirirana maemail templates kana magadzirirwo? Kana iwe unoda kudhonza uye kudonhedza dhizaini? Kana iwe unoda zvemhando yepamusoro zvemukati uye zvetsika kubatanidzwa mune yako email? Iwe uchada kuona kuti ESP yako ine maturusi uye kugona kwaunoda iwe kuti uzvigadzirire uye kutumira maemail zvakanaka.
Vanyoreri Management - zvemukati zvido, mafomu ekunyorera, uye nzvimbo dzekuzvinyora ndiyo kiyi yekuwana nekuita email yevanyoreri.
API - Iwe unoda here kubata vanyoreri, zvinyorwa, contnet, uye mishandirapamwe kunze kweESP? Yakasimba API inokosha.
Chechitatu Kubatana - Pamwe iwe unoda kubva-pasherufu kubatanidzwa kune yako yemukati manejimendi system (CircuPress ine izvi neWordPress), Mutengi Ukama Hwehukama Management chikuva, E-Commerce chikuva kana imwe system.
Reporting - tinya-kuburikidza mitengo, A / B yokuedzwa, list chengetedzo, yekutendeuka yekutevera, uye mimwe mishumo yakasimba iyo inoshuma zvizere email metrics ichakubatsira iwe kuwedzera kukosha kwepurogiramu yako yekutengesa email. Ive neshuwa yekuongorora uye enzanisa maficha eESP yega yega.
Uye zvechokwadi, mitengo ndiyo kiyi! Isu hatisi kuona wakakura musiyano muzvinhu pakati pevakawanda vevanopa pamusoro pevashandi veemail mumusika zvichienzaniswa neESP diki. Kana iwe uchikwanisa kudzikisira zvinhu zviri pamusoro izvo zvakakosha kusangano rako, saka ini ndinofunga kutenga pamutengo zvine musoro. Uye kana iwe uri kutumira mamirioni emaemail, zvinogona kunge zvine musoro kubatanidza neyechitatu bato senge Sendgrid, kana kutombovaka yako wega system.
Tags: 250okcan-spamcircupressemail apiemail bounce manejimendiemail dhizainiemail hunyanzviemail infographicemail kusanganaemail kutumira kumhanyaemail basaemail service provideremail spam kutevedzeraemail mubhadharo manejimendiemailmonkskunyanyakusarudzaspam mutemokunyorera manejimendi
Iva Nehanya Kana Uchienzanisa Maapuro nemaApple Miti